Kuhlukene imibono "ngamawele awu-10" - Ilanga News
Home Izindaba Kuhlukene imibono “ngamawele awu-10”
Kuhlukene imibono “ngamawele awu-10”
Umnyango wezempilo uyazihlangula kukho konke lokhu
Isalokhu iqhubekile imibuzo ngalona wesifazane onguNkz Gosiame Thamara Sithole (37), okuthiwa uqophe umlando ngokubeletha izingane eziwu-10.
LISHONE elayizolo uMnya-ngo wezeMpilo kuzwelonke usuvovekile uthungatha kuzo zonke izibhedlela uzama ukuthola owesifazane waseThembisa, eKurhuleni okuthiwa uzale amawele awu-10, eGauteng, kodwa lutho ukumthola.
Umqondisi kwezokuxhumana emnyangweni, uMnu Foster Mohale, utshele ILANGA ukuthi sebebheke kuzona zonke izikhu-ngo zezempilo kulesi sifundazwe, kodwa kababutholi ubufakazi bokuthi kuke kwazalwa lezi zinga-ne kwesinye sabo.
“Kasikwazi ngisho ukubheka kwezinye izifundazwe ngoba phela imibiko ithi baseGauteng. Sesi-bheke kuzona zonke izikhungo zethu kodwa okwamanje besinga-katholi bufakazi.
“Uma sibuthola, siyoshicilela isitatimende nokuthi njengomnya-ngo sizongenelela kanjani,” kusho yena.
Isalokhu iqhubekile imibuzo ngalona wesifazane onguNkz Gosiame Thamara Sithole (37), okuthiwa uqophe umlando wephula irekhodi likaHalima Cisse waseMali okuthiwa wazala izingane eziwu-9 esibhedlela saseMorocco ngenyanga edlule.
Ngokwemibiko yephaphandaba lesiNgisi iPretoria News, uNkz Sithole uthole lezi zingane ngo-Msombuluko ebusuku esibhedlela sasePretoria esingakadalulwa.
Leli phephandaba lenze udaba lukaNkz Sithole “noyise wezinga-ne zakhe” uMnu Teboho Tsotetsi lwaba sematheni izinsuku zilandelana, njengoba ngisho nasezinku-ndleni zokuxhumana bekulokhu kuphikiswana ngalo abantu befuna ukubona izithombe zawo “la mawele.”
Nalo leli phephandaba elishici-lele lolu daba, belibonakala linga-funi ukuveza imininingwane ephe-lele ngalesi sigameko, njengoba liveze ukuthi empeleni laba ne-ngxoxo noNkz Sithole ngenyanga edlule ngaphambi kokuba abelethe, okuthe ngobusuku abelethe ngabo, laxoxa naye ocingweni.
Liveze ukuthi lezi zithandani zicele ukuba udaba lwazo lunga-sheshe lushicilelwe ngoba zisaba ukuphepha kwazo nokuthi zifuna ukugcina nosiko oluthile kuqala.
Leli phephandaba likhombise ingxoxo eqoshiwe eliyenze noNkz Sithole noMnu Tsotesi izingane “zingakazalwa.”
Kule ngxoxo uNkz Sithole uveza ukuthi useyekile nasemsebenzini ngoba kakusasebenzeki.
Izolo ngoLwesithathu leli phephandaba liphinde lashicilela udaba lwesibili lapho liveze khona ukuthi licelela lo mndeni usizo ukuze ukwazi ukukhulisa lezi zingane, kwazise abazali bobabili kabasebenzi.
Lize lakhipha ngisho iminini-ngwane yasebhange lapho labo abangakwazi ukulekelela ngemali bengayifaka khona, nokuthi lo mndeni uqoke uNkz Makgoshi Maponyane ukuwukhulumela.
ILANGA lizamile ukuxhumana noNkz Maponyane kodwa ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa kanti nomqhafazo athunyelelwe wona akazange azihluphe ngokuwuphendula.
Udokotela wabesifazane, uDkt Dumisani Zungu, uthi umzimba womuntu wesifazane ungakwazi ukwenza izinto eziyisimangaliso njengoba nakho ukuzala izingane eziwu-10 ungakwenza, kodwa kuyaye kudingeke ukuba lokho kwenzelwe esibhedlela esinodokotela abaqeqeshiwe emkhakheni wezokubelethisa nokunakekela izingane ezincane kakhulu.
“Lezo zingane uma zizaliwe okwangempela, ngeke zibe ngaphezulu kuka-500g futhi uma ziphuma zijwayele ukufika isikhathi singakafiki, okusho ukuthi nokuphefumula zisuke singa-kwazi, kumele zifakwe emabhodleleni.
” Isicubu sukugcina esiphelela-yo enganeni ngamaphaphu nga-kho-ke uma iphume isikhathi si-ngakafiki, amaphaphu asuke engakavuleki kahle,” kusho yena.
Uthi lona wesifazane uma ezitholile ngempela lezi zingane, usengaphinde azithole ezinye futhi ngoba isibeletho uma sesiwe-nzile umsebenzi waso siyabuyela endaweni yaso noma phela sisuke sibonakala ukuthi kade sasisebe-nza.
Uthe amawele ahlupha ngokuba nempilo entengayo, okusho ukuthi uma esewu-10 lokho kusho ukuthi amaningi azobhena nezingqina-mba ezehlukene ngokwempilo.
Phakathi kwezifo azibalulayo, yi-jaundice nemikhuhlane eyehlukene. Uthi naye unina wezi-ngane angaba nezifo ezahlukene, abalule kuzona ukushaya kwegazi ngama-ndla.
Uthi okunye okuxaka lowo wesifazane kuba wukudonseka komzanyana ongaze ugcine ukhi-pha ubuthi obuthile uma usudo-nseke kakhulu.
Izolo kusabalale umbiko ezinkundleni zokuxhumana iMeya yase-Ekurhuleni, uMnu Mzwandile Masina ithi usutholakele umndeni wezingane, kodwa nakhona yanga-khipha imininingwane egcwele.
UMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi eGauteng, uthe uzo-kwazi ukuluqinisekisa namhlanje ngoLwesine lolu daba.
Okhulumela lo mnyango, uMnu Feziwe Ndwanyana, izolo uthe bebengakamuboni uNkz Sithole noma izingane.
“Sizokwazi ukuqinisekisa kahle kusasa ngoba osonhlalakahle bethu bazovakashela unina wezi-ngane kusasa (namuhla).
Okwamanje kasikaziboni ngamehlo ethu izingane kodwa yena umama siyamazi kusukela ngonyaka ka-2016 okuwunyaka aqala ukuthola ngawo izingane ezingamawele,” kusho yena.
Previous articleUvalo kulaxazwa ibhokisi lomshado
Next articleKuza izinguquko ezinkulu kwi-Arrows